Ikhaya lelizwe kufutshane noLwandle lweBaltic
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguIrmhild
I-"Altes Doktorhaus" yethu ibekwe entliziyweni ye-East Holstein - eLensahn.
Indawo yethu emalunga nama-50 m², igumbi leeholide elihle elinamagumbi amabini "Ikhaya Lelizwe" likumgangatho ongaphezulu kwaye inokufikelelwa ngezitepsi ezinyukayo, ukuze isibini esiselula, esisentliziyweni, siziva sisonjululwe.
Rhweba ngorhatya lwakho emva kosuku elwandle kwigadi eyilwe ngothando.
Yonke le ndlu izaliswe kukukhanya kwisibhakabhaka esikhulu esineemfama ezishushu kwaye ifumana umtsalane wayo okhethekileyo kwimiqadi yamaplanga.
Kwigumbi lokuhlala uya kufumana indawo yokutyela kunye nesihlalo esihle kunye nesitulo sokuphumla, apho unokukhangela ngokumangalisayo.
Ukongeza kwiincwadi kunye nonomathotholo oneCD player, uya kufumana imidlalo yebhodi kunye neTV enescreen esicaba.
Igumbi lokulala linebhedi ephindwe kabini (140x200 cm). Kukho ibhentshi entle ezantsi kwebhedi.
I-rack yempahla ene-hangers kunye nendawo yokugcina eyongezelelweyo iyafumaneka. Kukho indawo encinci yokuhlala ngokuthe ngqo phantsi kwefestile yophahla.
Kwiholo elincinci lokudibanisa kukho ikhitshi eneehotplates ezine, i-oven, ifriji kunye nefriji kunye ne-cookware.
Isixhobo sikwabandakanya umatshini wekofu, iketile, i-toaster, ibhoyila yeqanda, izitya kunye ne-cutlery, amalaphu okomisa kunye nezixhobo zokucoca - akukho nto ima endleleni yesidlo sakusasa sokuzonwabisa.
Kwakhona kwiholo yokudibanisa yindlu yokuhlambela enethayile eqaqambileyo ene-cubicle yokuhlamba kunye nendlu yangasese, isomisi seenwele kunye neetawuli ezinkulu nezincinci. Isibhakabhaka esincinci sikwaqinisekisa ukukhanya okwaneleyo apha.
Igadi egcinwe kakuhle ekhusela ilanga kunye nendawo yokosa inyama iyafumaneka kuzo zonke iindwendwe zethu. Rhweba ngorhatya lwakho emva kosuku elwandle kwigadi eyilwe ngothando. Izibane ze-atmospheric, iindawo zokuhlala kunye nefenitshala yegadi zibonelelwe.
I-"Altes Doktorhaus" yethu ibekwe entliziyweni ye-East Holstein - eLensahn. Ngokwembono yejografi, iLensahn liziko lesithili kwaye ke ngoko yindawo yokuqala yohambo oluya macala onke. Amahlathi, amachibi kunye neelwandle zimema ukuba ufumane kwaye uhlale.
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide zoLwandle lweBaltic eGrömitz naseNeustadt eHolstein zimalunga nemizuzu eyi-10-20 ngemoto.
Ezinye iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide zolwandle njengeHeiligenhafen, Dahme, Hohwacht kunye nolunye ulwandle oluninzi lunokufikelelwa ngokukhawuleza. Izixeko zeHanseatic zaseLübeck, iHamburg kunye nesiqithi saseFehmarn zinokufikelelwa kwimizuzu engama-20 ukuya kwengama-40 ngendlela yemoto ekufutshane netrafikhi.
Oogqirha, iikhemesti, iibhanki, iivenkile ezinkulu, iibhrari, ababhaki, iikhefi, iindawo ezahlukeneyo zegastronomic, iposi kunye nesikhululo sikaloliwe zonke zikumgama wokuhamba.
Hamba kwiigadi ze-spa ujikeleze ichibi lokusila kwaye uthathe uhambo kwixesha elidlulileyo ngokundwendwela intendelezo yemyuziyam eLensahn. Emva koko ihlathi lokuqubha - elisekoneni ukusuka kuthi - likumema ukuba uthathe idiphu.
Umbuki zindwendwe ngu- Irmhild
Schauen Sie sich gerne meine drei Ferienwohnungen - Country Home, Country Garden und Country Cottage - in Lensahn an. Ich freue mich, Sie bald als meine Gäste begrüßen zu dürfen! Herzliche Grüße aus dem hohen Norden. Irmhild
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lensahn